Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): “ ၀ ” လူမျိုးများ ရဲ့ စာပေ နဲ့ စကား ပါဝင်တဲ့ သီချင်းလေးပေါ့…“ ၀ ” ဒေသ တွင်း နေထိုင်ကြပါကုန်သော သွေးချင်း ညီအစ်ကိုများ … သွေးစည်းကြပါ စည်းလုံးကြပါ .
“ ၀ ” လူမျိုးများ ရဲ့ စာပေ နဲ့ စကား ပါဝင်တဲ့ သီချင်းလေးပေါ့…“ ၀ ” ဒေသ တွင်း နေထိုင်ကြပါကုန်သော သွေးချင်း ညီအစ်ကိုများ … သွေးစည်းကြပါ စည်းလုံးကြပါ .
at 10/25/2014 02:11:00 AM
Post by Yex Nang Moon.
“ မိမိ ဘ၀ ကို မိမိ သာ တည်ဆောက်ရာ” ၏ တဲ့.. အဆိုး/အကောင်း အားလုံးက မိမိနှင့်သာ အများဆုံး သက်ဆိုင်ပါတယ် ..မိမိ နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသ ကို… ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စည်းလုံးခြင်း နဲ့ မိမိတတ်နှိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ တစ်ယောက်/တစ်မျိုးဆီ ပါဝင် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်… တိုးတက် စည်ပင် သာယာလာပါလိမ့်မယ် …:“ စကား အများကြီး မပြောပဲ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြပြီး ” … သူတပါး ဒေသ ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်မူကို ထိခိုက်နစ်နာမူမရှိစေပဲ … မိမိ တို့ဒေသ တိုးတက် ဖို့ ကြိုးစားကြမယ်လေ… အရင်တုန်းက သူတစ်ပါး ပြောကြတဲ့ “ ၀ ” ဆိုတာ လူရိုင်း ခေါင်းဖြတ် ပညာမတတ် စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ကို စိတ်မဆိုး မနာကြဉ်း ပဲ .. ကိုယ့်ဒေသ လူမျိုး ရဲ့ စာပေ /ယဉ်ကျေးမူကို ပြန်လည် တိုးတက်စေဖို့ ခွန်းအား တစ်မျိုးပေးတဲ့ စကားတွေ / ဝေဖန်မူတွေပါလေ ၊။ by Yex Nang Moon